Vaovao momba ny indostrialy
Tombony sy fatiantoka eo amin'ny formwork Aluminium sy ny Plywood
Amin'izao fotoana izao, maro ny olona mpanao trano no manomboka miresaka momba ny fitrandrahana aliminioma tsy an-kijanona, izay manana tombony maro, ary na dia mahavita manolo ny plywood aza izy io, ny volavola vita amin'ny volotsangana, ny vy miasa vy sns. Manufactrurer matihanina amin'ny famolavolana aliminioma izahay, amin'ny fampitahana ny trondro sy ny aluminu ...
Leju Home sy Sina Home mitsidika ny Huajian Aluminium
Tamin'ny 7 Jolay, ekipa misy olona mihoatra ny 20 tarihin'ny mpitantana jeneralin'ny Leju Home sy Sina Home tonga tao amin'ny Huajian Aluminium. Nandritra ny fandraisana ary niaraka tamin-dRamatoa Ding, filoha lefitra mpanatanteraky ny vondrona dia niditra lalina tao amin'ny ozinina sy ny orinasan'ny mpikambana tsirairay izy ireo. Leju Home (NYSE: ...
Niorina tamin'ny fomba ofisialy ny varavarankely EOSS windows & door Business School
2021 dia taona manandanja amin'ny fampivoarana ny marika Windows & Door an'ny rafitra EOSS. Manaova fampiofanana arak'asa amin'ireo mpivarotra orinasa hanatsarana ny fahalalany ny marika, ny vokatra ary ny fametrahana ny EOSS. Hamafiso ny fianarana teknika, hampivoatra ireo sefo mpitarika sy mpivarotra ary ...
Fiofanana Aluminium FormWork miaraka amin'ny departemantan'ny varotra ivelany
Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd, miaraka amin'ny zavamaniry 5 ho an'ny mombamomba ny aliminioma, ary afaka mamokatra vokatra be dia be, toy ny varavarankely sy varavarana, rindrina ambainy, piraofilina alimina indostrialy, fonosana masoandro ary zana-kazo, kojakoja momba ny fiara misy aliminioma, fanaka vita amin'ny aliminioma ary koa ny aluminium. ..
Tongasoa eto amin'ny Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd Canton Fair 15 ka hatramin'ny 24 aprily.
Ny foara Canton dia fampirantiana natao tamin'ny lohataona sy ny fararano tamin'ny taona 1957 tany Guangzhou. Amin'ny maha-iray amin'ireo mpanamboatra profil aluminium alim-bolo avo indrindra any Shina, Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd dia nanatrika ny foara niaraka tamin'ny mombamomba ny aliminioma tena ...
fepetra fanoherana ny fanariana ny profil aluminium alefa any Shina mankany Aostralia
Tamin'ny volana oktobra 2020, nanambara ny valin'ny fanadihadiana manohitra ny fanipazana amin'ny profil aliminioma any Sina ny manampahefana aostraliana voakasik'izany. Ny taham-pahafahana miady amin'ny fanariana sy fanodinana andraikitra vaovao dia hampiharina aorian'ny 28 Oktobra 2020: Ny kaomisera ao amin'ny Anti-Dumping Co ...
Fampirantiana ao an-trano sy fampirantiana Windows ny laharana faha-12 Sina (linqu)
Ry mpanjifa malala: ny varavarana ao an-trano Sina 12 (Linqu) sy ny Windows Expo dia hanomboka mandritra ny 18-20 aprily 2021 ao amin'ny "Capital of Aluminium Industrial China." ny toerana dia No.5188 Donghuan Road, Linqu County, Shandong Province, Sina. Ny ...
Mankalaza ny fananganana birao vaovao an'ny vondrona Alumni Huajian.
Ny 5 Janoary 2021, misokatra amin'ny fomba ofisialy ny biraon'ny Birao Vaovao ho anay, Ity tranobe ity dia feno Windows & Doors mandalo, ny fanaka rehetra ao amin'ny birao dia vita amin'ny aliminioma izay anaovantsika tena. Mampiavaka ny trano ny fitsitsiana angovo, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanasitranana ...
Fanamarihana fialantsasatra amin'ny Fetiben'ny lohataona Voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ny fanohananao ny orinasanay. Manakaiky ny Fetiben'ny lohataona. Raha ny fandaminana sy ny fitantanana fitantanana ny vondrona dia mikasa ny hanidy ny fitaovana famokarana ao amin'ny Ja ...
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny varavarankely fitaratra, ny varavarankely mivoha sy mivadika ao anatiny, ary ny varavarankely misokatra ivelany sy mihidy ambony?
Ny varavarankely dia fantsom-panazavana ny rivotra sy ny jiro ao amin'ny efitranontsika. Noho izany dia mila miasa bebe kokoa amin'ny fisafidianana varavarankely isika. Anio, hasehonay anao ny tombony amin'ny varavarankely mihantona, ny varavarankely misokatra anatiny, ary ny varavarankely mihantona ivelany. Varavarankely: rivotra tsara, g ...
Vao tsy ela akory izay, ny lanonana fanaovan-tsonia fiaraha-miasa stratejika eo amin'ny Huajian Aluminium Group sy Akzo Nobel Paint (Jiaxing) Co., Ltd. dia notontosaina tamina vondrona Huajian Aluminium. Zhang Liantai, CEO an'ny Huajian Aluminium ...
1. Fahombiazana amin'ny fananganana avo sy tsingerina fohy: Ny rafitra fananganana firaka alimina dia rafitra bobongolo haingana, izay azo esorina ao anatin'ny 18-36 ora, ka sosona iray ihany amin'ny famolavolana alimina sy ny ...
Tombony sy fatiantoka eo amin'ny Alum ...
Fitsidihana Leju Home sy Sina Home any Huajian ...
Fikandrana sy varavarana EOSS Business School ...
Telefaona: 0536 335 6778
Adress: No.5188 Donghuan Road, County Linqu, Faritanin'i Shandong, Sina
Mpanidy aluminium, Aluminium Sliding Window Design, Kitapo alimina ho an'ny Windows, Windows Windows Doors, Aluminium Window Frame, Varavarana Aluminium sy Volavola Windows,